NOOBS: mametraka rafitra marobe amin'ny Raspberry pi misy an'ity fitaovana ity | Avy amin'ny Linux
Tamin'ny voalohany dia somary niahiahy momba ny Raspberry Pi aho, saingy nitsoaka an-daharana aho, atombohy amin'ny RaspAnd ary na dia ny zavatra nampanantenaina aza dia ny valiny. Nahatsiaro ho afa-po kely aho. Ny fahitana fa azo ampitomboina kokoa ity fitaovana ity dia mandraisa fanapahan-kevitra izay tsy tadiavinao tamin'ny voalohany ary tsara kokoa ny misafidy ny hametraka rafitra Linux ao aminy.
Raspberry Pi dia manana rafitra miasa ofisialy izay efa ho fantatry ny maro na efa henony Raspbian izay miorina amin'ny Debian. Ary koa Misy rafitra hafa, avy amin'ny antoko fahatelo ireo toy ny Ubuntu Mate, Windows 10, Libreelec, RecalBox, ankoatry ny hafa.
Raha jerena ity lisitry ny fahazoana ho antsika izay vao nahazo Raspberry ity dia tsy fantatsika ny sasany amin'ireo rafitra misy ireo ary ny hafa dia azo ariana tsy misy fangarony.
Mba hisorohana ny fitsapana ny rafitra tsirairay, mila mamolavola ny SD, apetaho eo aminy ny rafitra ary ampidiro ao anaty Raspberry Pi, manana fitaovana lehibe ahafahantsika mametraka ireo rafitra rehetra ireo miaraka amin'izay isika.
1 Momba ny NOOBS
2 Ahoana ny fampiasana NOOBS amin'ny Raspberry Pi?
Momba ny NOOBS
Rindrambaiko Out Of Box vaovao fantatra kokoa amin'ny anarana hoe NOOBS dia fitaovana lehibe azontsika ampiasaina amin'ny Raspberry Pi, ity fitaovana ity manome antsika ny fahafaha-mametraka rafitra fiasa mihoatra ny iray tsy misy fahasarotana ary amin'ny fomba tsotra.
Raha te hampiasa an'ity fitaovana ity tsy maintsy mankany amin'ny tranonkala ofisialin'ny Raspberry isika ary amin'ny fizarana fampidinana azy dia afaka mahazo NOOBS isika, ny rohy izany.
Araka ny ahitanao ny NOOBS manana kinova roa "NOOBS sy NOOBS Lite" izy io, ny mahasamihafa ny iray sy ny iray hafa dia ny dikanteny Lite dia tsy manampy Raspbian na LibreELEC ao aminy hahafahany mametraka azy eo an-toerana, raha ny kinova mahazatra kosa dia manana izany amin'ny alàlan'ny default.
Eto ianao Azonao atao ny misintona ny kinova tianaoNa izany aza, raha tsy liana amin'ny fametrahana Raspbian na LibreELEC ianao amin'izao fotoana izao dia afaka misafidy mivantana ny misintona ny kinova Lite ianao.
Vantany vao vita ny fisintomana dia miroso amin'ny famongorana ny rakitra azo izahay avy amin'ny fisintomana, amin'ity no ahazoantsika fampirimana miaraka amin'izay rehetra ilaina ao anatiny hahafahantsika mametraka rafitra marobe amin'ny Raspberry antsika.
Ahoana ny fampiasana NOOBS amin'ny Raspberry Pi?
ao anatin'ny ny safidy ananantsika amin'ny NOOBS dia ny hahafahana mampiditra rafitra ao amin'ilay folder "os" izany dia ao anatin'ny zavatra namboarintsika taloha kelin'izay.
Ao amin'io fampirimana io dia mila manampy fotsiny ireo rafitra irintsika hapetraka isika.
Raha izaho manokana dia tsy nahita rafitra fanampiny "amin'izao fotoana izao" izay ho tsikaritry ny NOOBS, satria ireo hitako dia tonga amin'ny endrika sary disk.
Efa nahavita ny zava-drehetra, Manohy mandika ny atiny rehetra ao amin'ilay fampirimana NOOBS lehibe izahay ary mametraka azy ao anaty SD izay efa voaforona sy vonona hampiasa.
Ya nampiditra ny SD tamin'ny Raspberry Pi anay ary mifandray amin'ny zava-drehetra ilaina izy, dia tohizinay amin'ny herinaratra hampodina azy io, dia hahita efijery kely isika ary hiandry segondra vitsy hanombohana ny NOOBS.
Vita ity miankina amin'ny kinovan'ny NOOBS izay nakarinao no hitanao voalohany, raha nampidina izy ireo ny kinova mahazatra dia hahita Raspbian sy LibreELEC vonona hapetrakaraha Raha ilay kinova kely io dia tsy hahita na inona na inona izy ireo amin'izao fotoana izao.
Ao anatin'ny interface NOOBS dia hitantsika fa manana safidy maromaro izy io ary tena manam-pahaizana izy ireo, ny zavatra voalohany dia ny mifandray amin'ny tamba-jotra wifi.
Ya NOOBS mifandray dia hanavao ny lisitry ny rafitra misy, mampiseho amintsika misimisy kokoa, satria hampidina sy hametraka azy ireo izany.
eto andao hifidy izay tadiavintsika ary mazava ho azy ireo izay avelantsika hametraka satria miankina betsaka amin'ny haben'ny SD izany.
Raha vantany vao voafantina ireo rafitra dia tsindrio fotsiny ilay kisary fametrahana ary tsy maintsy miandry ianao mandritra ny fotoana fanatanterahana ny fizotrany.
Amin'ny farany, hilaza amintsika ny NOOBS fa vita ny dingana ary miroso amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny Raspberry Pi isika hahitantsika ireo rafitra misy ao aminy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » NOOBS: mametraka rafitra marobe amin'ny Raspberry pi miaraka amin'ity fitaovana ity